Blogs: क्लबरुट रोग:एक जानकारी!
क्लबरुट रोग:एक जानकारी!
क्लबरुट रोग बन्दा ,काउली ,मुला लगायतका तरकारी बालीका परिवार मा लाग्ने एक जिद्दी रोग हो! एस रोग को जिवादु एक किसिमको ढुसी हो या हैन भन्ने कुरामा पनि बैज्ञानिक हरु बिभाजित नै छन् ! यस लाई जिद्दी भन्नु को पछाडी के कारण छ भन्दा,यस रोगका जिवादु करिब २० वर्ष सम्म पनि उपर्युक्त बोटको अभावमा पनि माटो मा बाचिराखन सक्छन ! क्लबरुट रोगमा मुख्य त जीवाणुले जरामा प्रबेस गरि जरा बाट खाध्य तत्व उपयोग गरेर जरामा गाठा बनाउने गर्दछ जस कारण जराले माटोबाट पानी र अन्य खाध्य तत्व सजिलै लिन सक्दैन! फलस्वरूप बिरुवाका माटो माथिका भाग पहेलिने,ओइलिने,सुक्ने,पात नुग्ने गर्दछन ! नेपालमा यस रोग लाई...
स्टाइलो (Stylo) Stylosanthes sp. घाँस बारे जानकारी!
परिचय : स्टाइलो नेपालको तराईदेखि मध्य–पहाडी क्षेत्रका रूखो, पाखो, खरबारी, बगर तथा वृक्षरोपण क्षेत्रमा लगाउन सकिने बहुवर्षीय कोसे घाँसबाली हो । यसले केही छायाँदार ठाउँमा पनि उत्पादन दिन सक्ने भएकाले वृक्षरोपण गरिएका स्थानहरूमा पनि सफलतापूर्वक यसको खेती गर्न सकिन्छ । कोसे घाँसबाली भएकाले यसले माटोमा वायुमण्डलीय नाइट्रोजन मिलाएर माटो मलिलो बनाउँछ । यसको जरा माटोमा गहिरो जाने र जमिन माथि झाङ्गिएर भुइँ पनि राम्ररी ढाक्ने भएकोले भू–क्षय रोक्न र पहिरो गएको स्थानमा पनि यसको प्रयोग हुने गरेको छ । हावापानी : स्टाइलोलाई उष्ण तथा समशितोष्ण जलवायु चाहिन्छ । यसलाई...
किरा बिरुवाको शत्रु मात्र होइन् , मित्र पनि हो !!!
हामिले किरा भन्ने बितिकै हानी नोकशानी गर्ने जिव को रुपमा चिन्दछौ तर यो सानो निर्दोश जिवबाट हुने फाइदा कहिल्यै ख्याल गर्दैनौ । एउटा अनुसन्धानले देखाए अनुसार "सन्सारका सबै किराहरुलाई आज मार्यो भने अगामी ४ बर्ष सम्म बालिको उत्पादन त लिन सकिन्छ तर त्यस पछाडी खाद्यान्नको हाहाकार हुन्छ्" । त्यसैले किराको सकारात्मक पक्षबारे अहिलेका किसानमा जनचेतना ल्याउनु अति नै आवश्यक देखिन्छ । किराले बोटबिरुवामा पुर्याउने केहि महत्वपूर्ण र राम्रा पक्षहरु : १) किराले बोटबिरुवामा परागसेचन गराउँछ अनि मात्र फूलमा फल लाग्छ। मौरीकिराले मात्र ८०% बोटबिरुवामा परागसेचन गराएको ...